Telegram ရှိ ချန်နယ်များကို ရှာဖွေရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
Telegram တွင် လိုင်းများရှာဖွေရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
Telegram messenger သည် cloud အခြေခံ instant messaging app ဖြစ်ပြီး iOS, Android နှင့် PC များတွင်ရနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်ပလက်ဖောင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူသန်း ၆၀၀ ကျော်ရှိပြီးအရေအတွက်သည်နေ့စဉ်တိုးများလာနေသည်။
Telegram သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော မိုဘိုင်းနံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ အက်ပ်သို့ အကောင့်ဖွင့်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီး တရားဝင် SIM ကတ်ရှိသူတိုင်းနီးပါး Telegram အကောင့်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် လွယ်ကူစေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၎င်းတို့၏ စက်များတွင် Telegram messenger ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ အဆက်အသွယ်စာရင်း တစ်ခုလုံးကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆက်အသွယ်မပြတ်ရန်နှင့် အချိန်မှန်တုံ့ပြန်မှုများသည် အရေးကြီးသောအလုပ်များကိုပြီးမြောက်ရန် အရေးကြီးသောကမ္ဘာတွင်၊ သင်နှင့်စကားပြောရန် လိုအပ်သောလူကိုရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်စာရင်းကို ကိုယ်တိုင်သွား၍ အချိန်မဖြုန်းနိုင်ပါ။
ဘတ် စာမျက်နှာများကို Microsoft Edge တွင်မည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်မှာသေးငယ်တဲ့ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းရှိလျှင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင့်မှာ Telegram ကိုအသုံးပြုတဲ့အဆက်အသွယ်တစ်ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ရင်ကော။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အဆက်အသွယ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်းသည်ကြီးမားသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ Telegram မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရှာဖွေထားတဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။
အဆင့် 1. သင့်စက်တွင် ၎င်းကို မရှိသေးပါက Telegram Messenger အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အဆင့် 2. မျက်နှာပြင်၏ ညာဘက်အပေါ်ရှိ ချတ်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 3. သင်ယခုရှာဖွေရေးဘားကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်၊ အသုံးပြုသူအမည် သို့မဟုတ် သင်နှင့်ဆက်သွယ်လိုသောလူ၏အမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အဆင့် 4. အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို သင်ယခုမြင်ရပါမည် - တစ်ခုမှာ သင့်အဆက်အသွယ်စာရင်းမှ အဆက်အသွယ်ကိုက်ညီမှုများပါရှိပြီး အပိုင်းတစ်ခုသည် Telegram အသုံးပြုသူအခြေခံမှ အဆက်အသွယ်များပါရှိသည်။
အဆင့် 5. မှန်ကန်သောအဆက်အသွယ်ကိုနှိပ်ပြီး ထိုလူနှင့်စတင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤသည်မှာ Telegram ရှိ လူများ သို့မဟုတ် ချန်နယ်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပုံဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော Zoom ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
နောက်တစ်ခု Facebook ပေါ်ရှိ ဘာသာစကားကို ပြောင်းလဲရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း